Ny pseudo dia mety ho fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena | Valin'ny Fanamarinana
Home fahasalamana Fihetsika mampihetsi-po
Ny fikarohana vao haingana dia naneho izany fitondran-tena fa tsy zavatra tsotra Mety hampidiran-doza ihany koa. Azon'izy ireo atao ny manova ny fiovan'ny karazan-tsakafo ao amin'ny atidoha, izay mahatonga ny kôkainina na ny alikaola na ny fiankinan-doha amin'ny nikôtinina. (Zahao etsy ambany). Ireo fihetsiketsehana ireo dia ny filokana, ny aterineto, ny media sosialy toy ny Facebook ary mety hampiasa fampiharana toy ny Tinder na Grindr.
Indro misy taratasy avy amin'ireo mpahay siansa malaza eran-tany izay manazava ny antony tokony hiheverana ny aretina vetaveta amin'ny Internet ho aretina mampiankin-doha koa. Izy io dia mpiara-manoratra amin'ny mpikaroka marobe amin'ny sehatry ny fitondran-tena mahamenatra. Mampametra-panontaniana raha toa ny fizahana aretina vaovao an'ny CSBD eo ambanin'ny sokajy "Impulse Control Disorder", izay onenany ankehitriny. Nilaza ny mpanoratra fa ny fanampiana tena maharesy lahatra ary misy dia ny CSB ho toy ny 'aretina mampidi-doza.'
Fotoana fohy, zippy animation ho an'ny ankizy porn addiction. Ity dia animation lava kokoa izay tena manazava ny fototry.
Maro amin'ireo trangan-javatra ireo no manosika ny 'supernormal' version ny valisoa voajanahary na mpanohana ara-boajanahary ny sakafo, ny fatorana ary ny firaisana ara-nofo. Ny sakafo fihinanan-tsakafo miaraka amin'ny sira, siramamy ary tavy avo lenta dia 'sakafo tsy azo antoka' amin'ny habetsahan'ny kalôria avo lenta nomen'ny atidoha ho an'ny tsy fahampiana; Ny fampahalalam-baovao sosialy dia tahaka ny dikan-teny mampihetsi-po mifangaro, namana an-jatony amin'ny tsindry; ary ny pôrnôn'ny aterineto amin'ny alàlan'ny faniriana tsy miangatra ho an'ny tanora "mafana volo" dia dika an-jatony amin'ny firaisana ara-nofo.
Miaraka amin'ny zava-mahadomelina, mila dòz kokoa ny mpampiasa mba hahazoana ny 'hit'. Miaraka amin'ny aterineto, mila fotoana lavalava kokoa na mihoatra lavitra noho ny fahatsapana ny vokatra mitovy ny mpiserasera. Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia faly loatra manome izany.
Satria ny dopamine dia manandrana ny fiandrasana ny 'valisoa', dia miverina haingana izy rehefa avy nahazo ny valisoa. Ireo mpampiasa dia mila mitazona fitaovana vaovao mba hitazomana ny valisoa ho avy. Raha mbola manery ny atidoha hatrany hamokarana tsy tapaka isika, dia manantitrantitra ny rafitra ary manakatona ny famokarana ho fiarovana fiarovana. Raha mbola manohy mibaribary ihany anefa isika, dia manapa-kevitra ny atidoha fa tsy maintsy misy hamehana ho an'ny tanjona velona ary manosika ny fihetsika ('efa ampy'). Amin'izay, ny dopamine avo lenta dia mitarika ny famotsorana proteinina iray antsoina hoe Delta Fos B. Izany dia mamolavola ny rafitry ny valisoa izay mamadika ny atidoha mba hanampy antsika hifantoka, hahatsiaro ary hamerina ity valisoa manan-danja ity.
Ireo toetra efatra dia mifandray amin'ny fiovana ara-batana eo amin'ny fiasan'ny atidoha vokatry ny dingan'ny fiankinan-doha. Ireo dia:
• Mekanisma fanaraha-maso - Fihenan-tena ambony
• Fikorontanana ara-pihetseham-po
Ny 'Desensitisation' dia valim-baly ho an'ny fahafinaretana, indrindra ho an'ny valisoa voajanahary, toy ny sakafo na fifandraisana amin'ny hafa. Matetika dia ny fahitan'ny atidoha ny fiovan'ny ati-doha amin'ny fidirana amin'ny atidoha. Mahatsiaro ho ketraka izy ireo, manambitamby, matevina ary mampalahelo. Ny fampilazana dopamine miongotra sy ny fanovana hafa dia mamela ny mpampiasa mavesatra tsy mahatsiaro ho mahafinaritra isan'andro sy 'noana' noho ny dopamine-raising activities and substances. Mila fanentanana bebe kokoa sy lehibe kokoa izy ireo mba hahazoana resa-be. Mety handany fotoana bebe kokoa amin'ny aterineto izy ireo, hanatontosana fivoriana tsy tapaka amin'ny alàlany, mijery raha tsy masturbating, na mikaroka ny lahatsary tonga lafatra mba hifarana. Saingy ny fanesorana dia mety haka endrika fihokoana amin'ny karazana vaovao, indraindray sarotra kokoa, vahiny, ary manelingelina mihitsy aza. Tadidio: ny fahatairana, ny fahagagana ary ny tebiteby dia mamorona adrenaline jack up dopamine ary hampitombo ny firaisana ara-nofo.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny zavatra tokana mahasarika ny saintsika sy mampiakatra ny fanahintsika dia ny tanjontsika, ny fihetsika mampidi-doza na ny safidintsika. Izany dia satria lasa 'nahatsiaro tena' tamin'io isika. Ny fanentanana dia miteraka faniriana mahery vaika na fahatsiarovan-tena fahatsiarovan-tena amin'ny fahafinaretana, 'fahatsiarovana euphoric', rehefa navadika. Ny rohy fampahatsiahivana dia ny ati-doha izay «mifampikambana, miara-mirehitra» miaraka amina hetsika. Ity fahatsiarovan-tena Pavlovian ity dia nahatonga ny fiankinan-doha ho mahery kokoa noho ny hetsika hafa rehetra tamin'ny fianana mpidoroka.
Ny fifandraisana nerveur niverimberina dia mahatonga ny rafitra valim-pitia hiantsoantso ho valin'ny fanampiana sy fifandraisana mifandraika amin'ny fiankinan-doha. Ireo mpifoka kôkaine dia mety hahita siramamy ary hieritreritra ny kôkainina. Ny alikaola iray dia mihaino ny solon'ny lasopy na mamoaka labiera rehefa mandalo ny trano iray izy ary maniry avy hatrany.
Ho an'ny adolantsento amin'ny filma an-tserasera, ny fampidirana ny solosaina, ny fahitana pop up, na ny tokantrano irery, dia miteraka fikirizana mafy ho an'ny pôrnônôma. Moa ve misy zazalahy iray tampoka be (libido marina) rehefa mandeha mivarotra ny vadiny, ny reniny na ny mpiara-mianatra aminy? Inoana. Mety hihevitra anefa izy fa toy ny hoe eny amin'ny fiaramanidina izy, na olon-kafa mifehy ny atidohany. Ny sasany dia mamaritra adihevitra vetaveta an-tserasera toy ny hoe 'miditra amin'ny tonelina iray izay tsy misy afa-tsy iray monja: pelaka'. Angamba mety mahatsapa fientanam-pihetseham-po sy haingana izy, ary mangovitra mihitsy aza, ary ny zavatra rehetra azony atao dia ny miditra ao amin'ny tranonkalany malaza. Ireto misy ohatra momba ny lalan'ny fiankinan-doha izay mampihetsi-po amin'ny rafitra valisoa, mikiakiaka, "ataovy izao!" Na dia mety hampidi-doza aza ny fanaovana firaisana ara-nofo dia tsy hampitsahatra azy ireo izany.
Ny fihanaky ny aretina, na ny fihenan'ny atidoha ao amin'ny faritra avaratra, dia mampihena ny herin'ny fahefana na fifehezan-tena, eo anatrehan'ny fahatokisan-tena mafy. Mitranga izany vokatry ny fihenan'ny volombava sy ny fotsy hoditra, any amin'ny faritra avaratra. Ity dia ampahany amin'ny atidoha izay manampy antsika hametraka ny safidy amin'ny safidy izay tsy tsara ho an'ny fironantsika maharitra. Manampy antsika hiteny hoe 'tsia' amin'ny tenantsika rehefa mahatsapa fakam-panahy isika. Miaraka amin'ity faritra ity dia reraka, manana fahaizana mihemotra isika mba hijerena ny vokadratsiny. Mety mahatsapa ho toy ny ady an-ady. Ny lalan-tsaina izay mihiaka hoe 'Eny!' raha mbola miteny ny atidoha avo kokoa hoe 'Tsia! Tsy indray izao! ' Miaraka amin'ny fitantanana mpanatanteraka eo amin'ny atidoha ao anatin'ny toe-javatra marefo, dia mandresy ny lalan'ny fiankinan-doha.
Ny adolantsento dia marefo roa amin'ny fiankinan-doha. Tsy vitan'ny hoe manana dopamine maromaro kokoa izy ireo amin'ny fiatrehana ireo risika (ketraka tanteraka ny pedal), saingy ny paompy lava dia tsy nahomby tanteraka, (tsy mahomby loatra ny fiatoana).
Dikan-teny mampiahiahy. Izany dia mahatonga ny fahatsapana tsy dia kely loatra hitarika ho amin'ny faniriana sy ny fahavoazana noho izy ireo mampiasa ireo làlana mahery vaika.
Ireo trangan-javatra ireo no fototry ny fiankinan-doha rehetra. Nofintinin'ny iray tamin'ireo olon-droa manitsaka sary vetaveta ireto:Tsy ho voky izay tsy mahafapo ahy mihitsy aho ary tsy hahafa-po ahy velively'.
Fanesorana. Betsaka ny olona mino fa ny fiankinan-doha dia mitaky fandeferana roa (filàna fanentanana bebe kokoa mba hanana vokatra mitovy amin'izany, ateraky ny desensitisation) ary ireo soritr'aretina fanesorana amin-kerisetra. Raha ny marina, tsy misy ihany koa ny fepetra ilaina amin'ny fiankinan-doha - na dia matetika ireo mpampiasa pôrnôgrafia ankehitriny aza dia mitatitra ny roa. Ny fizarana fizahan-toetra rehetra dia fanandramana fanandramana, 'mbola ampiasaina na dia misy vokany ratsy aza'. Izany no porofo mivaingana amin'ny fiankinan-doha.
Raha te hahazo fanazavana misimisy kokoa momba ny fikarohana momba ny fandeferana sy ny fandaniana dia tsindrio Eto (tranokala ivelany, manokatra varavarankely vaovao).
<< Fiankinan-doha Fanarenana >>